Ma doonaysaa in aad dhirtuba websites ah ee aad taleefan Android ama kiniin ah, oo hadda raba inay gurmad Bookmarks ka Android phone ay dhacdo in laga yaabo in aad tirtirto ama iyaga ula kac ahayn lumiyo? Waxaa tahay barnaamijyadooda badan si fudud oo haboon oo kaa caawin kara Bookmarks Android gurmad. In qayb hoose, waxaana idin tusin doonaa barnaamijyadooda ka. Oo ay tahay waxa aad jeceshahay ku kalsoonow.
Qaybta 1. Top 3 Apps in Bookmarks kaabta telefoonka Android ama kiniin
Bookmark Sort & kaabta Free 173km Android 1.5 iyo ilaa 4.3 / 5
Maxthon dar-on: Bookmark kaabta Free 736K Android 1.6 iyo ilaa 4.1 / 5
Tababaraha Bookmarks Free 131K Android 2.1 - 2.3.7 4.3 / 5
1.Bookmark Sort & kaabta
Bookmark Sort & kaabta waa Android app yar. Sidaa daraadeed, kara inaad gurmad oo dhan Bookmarks ku saabsan Android oo soo celiyo mar kasta oo aad u baahan tahay. Ka sokow, waxa ay kala sooci karto bookmark ah, si aadan u baahan tahay in aad walwasho in Bookmarks aad u badan waxaa laga yaabaa kijinka oo ay adag tahay in ka heli doontaa waxa aad rabto. Ka sokow, waxa kale oo aad u guuri kartaa bookmark kasta oo kor iyo hoos. By dheer siyoodba on bookmark ah, waxaad ka heli kartaa in ka badan fursadaha. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho Google Chrome bookmark ku saabsan qalabka socda Android 3/4, waxaad isticmaali kartaa app this.
Download Bookmark Sort & Back ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happydroid.bookmarks&hl=en
Ku dar-on 2.Maxthon: Bookmark kaabta
Sida Bookmark Sort & kaabta, Maxthon dar-on: Bookmark kaabta sidoo kale waa yar laakiin fiican Android gurmad bookmark app. Sidaa daraadeed, aad awoodo si fudud gurmad oo dhan Bookmarks si aad u card SD. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad u saamaxaaya in ay dajiyaan Bookmarks aad ka browser kale Android default, sida Skyfire. Si kastaba ha ahaatee, hal shay waa in aad ogtahay in aan loo isticmaali karaa sida app hal.
Download Maxthon dar-on: Bookmark kaabta ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mx.app.BookmarkIO&hl=en
Tababaraha Bookmarks weyn ee ay taageerto kor u Bookmarks browser Android inay card SD u shaqeeyo. Waxaad soo celin badbaadi kara Bookmarks ka card SD si fudud. Haddii aad qabto wax badan oo Bookmarks taas oo ka dhigi u adag tahay in la ogaado waxa aad rabto, waxaad isticmaali kartaa app inuu kala soocaan by codsanaya amar xogta Horeeyaan abuurid si toos ah ama gacanta. Ka sokow, waxa kale oo aad tirtiri kartaa Bookmarks stock qufulan ah. Kaliya hal khasaare waa in app this taageertaa kaliya Android 2.1 in 2.3.7.
Tababaraha Download Bookmarks ka Google Play >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guenmat.android.bookmarks&hl=en
Qaybta 2. 3 Siyaabaha Bookmarks Browser kaabta in Cloud / PC
Ka sokow Android phone, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay u hagaagsan ama Bookmarks browser gurmad on your computer si hadhaysaa. Waxaad si fudud dib u heli kartaa. Qaybtan, waxaan idinku leeyahay 3 siyaabood oo aad ku hagaagsan Bookmarks browser.
1.Google Chrome nidaameed:
Haddii aad ku rakibtay Google Chrome on your computer iyo telefoonada Android, waxaad u isticmaali kartaa si bookmaks gurmad ka Android inay computer. Waxaa doono Bookmarks gurmad browser aad macluumaadka aad koonto Google. Si aad qotomisay u hagaagsan ee chrome guji Chrome ee menu doorasho ka dibna dooro Gal Chrome. Fur screen Settings oo guji goobaha Advanced u hagaagsan ka dib markii la saxiixato, xakamayn karto xogta browser. Sidaa daraadeed, aad waafajinta karaa
1. Apps 2. Auto buuxin Data 3. Taariikhda 4. ID Password 5. Settings 6. Dulucda 7. Bookmarks
Markaas, guji menu chrome on geeska kore ee midigta iyo dooran Bookmarks. Riix Manager Bookmark> Abaabulaan> Bookmarks dhoofinta in file HTML. Waxaad badbaadin karo Bookmarks sida file HTML ah. Markaas, aad dajiyaan karaa Bookmarks ay u browser kale.
Haddii aad tahay qof user Firefox ah, oo ay ku rakibi Firefox labada telefoonka Android iyo computer, waxaad isticmaali kartaa Firefox nidaameed in Bookmarks gurmad on Android inay Firefox desktop iyo computer. Firefox u hagaagsan ( https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-up-firefox-sync ) waxaa loo isticmaalaa in Firefox si hagaagsan xogta browser aad. Ka hor inta in la si gaar ah loo isticmaalo hagaagsan. Haddaba waxaa summation ee Firefox ah. Si aad u isticmaasho hagaagsan Firefox aado Firefox browser rasmi ah oo ay doortaan icon u hagaagsan oo ay isticmaalaan ikhtiyaarka.
Hagaagsan Firefox waafajinta doonaa
60 maalmood ee taariikhda
ID la sirta ah
App Tani waxay abuurtaa iyo edit bookmark
Bookmarks kaabta inay u fayl-
Sidoo kale dajiyaan Bookmarks ka siiyaa biraawsarkaaga Android
Riix Bookmarks> tusiya All Bookmarks in la furo suuqa kala Library. Daaqadda Library, guji Import oo kaabta> kaabta ....
Xmarks ( http://www.xmarks.com/ ) waa sahlan in la isticmaalo dar-ku si hagaagsan iyo Bookmarks browser raad raac ah oo Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer iyo in ka badan. Just saxiixdo xisaabtaada Xmarks, markaas oo dhan Bookmarks browser lagu taageeray doonaa. Sidaas, waxaad isticmaali kartaa Bookmarks ku kombiyuutarada badan.
Just u tag website-ka rasmiga Xmarks oo guji rakib Hadda> Download Xmarks in aad ku darto si aad browser.
Markaas, download iyo rakibi Xmarks u Macaamiisha Premium telefoonka aad Android. Saxiix in aad xisaabta Xmarks in ay isticmaalaan Bookmarks badbaadiyey ee adeegga. Markaas, aad awoodo Bookmarks gurmad by syncing la Android browser. Ka sokow, waxa kale oo aad ku dari kartaa ama tirtirto Bookmarks. Si kastaba ha ahaatee, waa tijaabo oo lacag la'aan ah 14-maalmood oo kaliya, ka dibna waxaad u baahan tahay in ay qaataan $ 12 Times Xmarks Premium / sano ka dib.
Download Xmarks u Premium Macaamiisha ka Google Play >> (Xmarks u Macaamiisha Premium)
Sida loo saar Preinstalled Apps on Android
> Resource > Android > Sida loo kaabta Bookmarks on Android Phone si fudud